Tuesday October 29, 2019 - 08:34:54 in Wararka by Super Admin
Ugu yaraan 79 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen iskusoo baxyada rabshadaha wata lagasoo bilaabo maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay, saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan kun oo dhaawacyo qaba ay jiifaan isbitaallada.
waxaa guul darraystay bandow ay xukuumadda Shiicadu ku badantahay ay uga dhawaaqday magaalada Baqdaad, dhinaca kale weerar madaafiic ah ayaa lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidamada Mareykanku ka deganyihiin wadanka Ciraaq.
Ilo wareedyo dhanka amniga ah ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday hoobiyaal lagu qaaday saldhigga ciidanka Mareykanku ay ku leeyihiin deegaanka Taaji ee waqooyiga magaalada Baqdaad.
Warbaahinta Ciraaq waxay sheegtay in sedax madfac oo aan qarxin ay ku dhaceen gudaha saldhigga oo ay ku suganyihiin ciidamo American ah, kooxo shiico ah oo wakiillo u ah dowladda Iiraan ayaa lagu eedaynayaa in ay mas'uul ka yihiin weerarkan.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay ayay weeraro madaafiic ah saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq kala kulmayeen maleeshiyaad latacaadufsan xukuumadda iiraan.